Cabsi laga qabo in uu dagaal beeleed ka dhex qarxo beelaha degen Gobolka Waqooyi Bari
Buluugleey October 24, 2005.
Waxaa isa soo taraya wararka sheegaya in amaanka gobolka waqooyi Bari uu dhawaantan ka soo darayo, kadib markii uu maamulka halkaasi ka dhisan uu malleeshiyo beeldka gobolka u waayey mushaaharado. Warar aanu ka soo xiganay shabakada Qaranimo ayaa xaqiijinaya in amaan xumida ka jirta guud ahaan Gobolka Bari ay ka timid wadashaqeyn la’aanta ka dhex aloosan maamulka iyo malleyshiyo beeleedka gobolka.
Wararku waxay intaas ku darayaan in dad badani ay ka careysan yihiin lacagaha sida sharci darrada ah uu ugu takri falay ku-xigeenka Cadde Muuse oo la sheegayo inuu hanti badan is-dabamariyey hantidaas oo markeedii hore loo qondeeyay in mushahaarado loo siiyo malleeshiyo beeleedka Gobolka. Dhaqaala xumada la soo deristay gobolka ayaa waxaa meesha ka dhashay xasilooni daro, waxaana soo foodsaartay in si is-dabajoog ah dad badani si tuugaaleysi loo dilo, iyo in gawaari badan waddooyinka isku xiro gobolka lagu dhaco.
Ilaha dakhliga ugu ballaaran ee Gobolka Bari wuxuu ka sooo galaa furdada iyo in kaloo xaddidan oo cashuuraha rayidka laga soo ururiyo. Dhaqaalahaas intiisa badan wuxuu maamulka u adegsadaa sidii khalkhal siyaasadeed loogu ridi lahaa amaanka Bobolka Banaadir. Waxaa la qiyaasay in uuu dhaqale ballaaran ku baxo kala qeybinta iyo isku dirika xildhibaanada ku sugan Muqdisho ee siyaasada kula looltamaya Col. Cabdullahi Yusuf. Waxaa kaloo iyadana meesha ku jirta in dhaqaalahaasi qaar ka mid ahi uu maamulka u isticmaalay hubeeynta malleeshiyadii laga soo ururiyey Gobolka Bari oo intooda badani ay ku sugan yihiin Gobolka Shabeelada Dhexe, magaalada Jowhar.